NAIRA AGAHI EME GI OGARANYA
Nke 'a bụ ihe ọzọ di mma ana m' ekewu. Anọ m na-agbasi mbọ ike na-ekwu okwu banyere ego crypto mana ufodu ndi mmadu chere na m di nzuzu banyere ya(technology )ma ọ bụ n'ihi na m bụ komputa sayentist maka ịhụnanya m nwere maka teknụzụ a na-ejide m. Mba! nke ahụ abụghị ihe kpatara ya. Ana m ewe iwe maka ego na akụnụba anyị na mba Naijiria a. Imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ anaghị agụ akwụkwọ iji mara na eji ugwo nweta naira anyi, ya mere, idebe ya agaghị eme ka ị baa ọgaranya, kama ọ ga-eme ka ị ịda ogbenye.
Ọtụtụ n'ime anyị kwesịrị ịmara na ego dị na ụlọ akụ anyị agaghị eme ka ị nwe ego n'efu. ọ bụ ike agbụ. I debe ego na ụlọ aku agahi amutara gi mmagi obula ka ma ha ewere ego i tara ahụhụ kpata binye mmadu ma nwere ụrụ di n' ime ya. Enweela ọtụtụ ndị na-eche na ị kpakoba NAIRA ga-eme ka ha bụrụ “Robert” ma ọ bụ “Donald Trump” nke oge anyị. Ha na-ekwu ihe dị ka; ọ bụghị ego ole ị nwere kama ole ị na akpakoba! ana m aza ọtụtụ oge, ma ọ bụrụ na ịchekwaa “FIAT” ị na-eme onwe gị nnukwu ọgba aghara.
Maka ndị na-amaghị, ka m kọọrọ gị akụkọ maka Naira anyị.
Ọtụtụ ego di n' aka anyi bụ ụlọ akụ weputara ya site na mbibi, Uzo aga esi nwebata Ọtụtụ ego na ala anyi bu inweta ya na aka ndi ụlọ akụ, mana nke a na-edebe anyị n'ime ọnyà iji ụgwọ na-amaghi.
Ee, nwanne m nwoke. Naira dị n'akpa gị adịghị mma ọ bụla ọ bụ ego ojii.
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ, a na-emepụta ego ọhụrụ, naanị ụzọ esi ankwụnye ego n'ime akụ na ụba ala anyi bụ site na mgbazinye ego, n'ihi ya, ka ụgwọ ahụ na-agbago ka ọnụ ọgụgụ ego ahụ dị. Ụgwọ ndị ahụ na-enye ndị mmadụ echiche na ihe niile dị mma na mba ahụ. Amaara m na mụ na enyi m ga-ahụ ndị mmadụ n'ụlọ mmanya, ụlọ egwuregwu, klọb na nkwonkwo oriri dị oké ọnụ na anyị ga - asị "ọ dịghị onye kwesịrị ịgwa anyị na ego adịghị na mba a" ee, ego dị, ma ego ahụ bụ ụgwọ di na udi nke akụ na ụba.
Udi ego inwere n'akpa ụlọ akụ gị ka ụgwọ na amalite na mba ahu. Ihe m na-ekwu bụ nke a, ọ bụrụ na ị nwere otu nde naira na ụlọ akụ gị ugbu a, onye ọzọ ga - eji ụgwọ otu nde. O gịnị kpatara ya?
N'ihi na ọ dịghị ụzọ ị nwere ike isi nwe ego ahụ ụlọ akụ gị ma onye ozo agaghi igbara ya na mbibi n'ụlọ akụ? ị ghọtala ya ugbu a? Amaara m na ị ga aghota, nke a bụ otú ego si aga. Nke a bụ otu e si arụ ọrụ ụwa. “FED” mere nke a.
Ọtụtụ ego Ọtụtụ ụgwọ
Ugbu a Naijiria dị oké njọ, ma naanị ụzọ nke aga esi pụọ na ya bụ site na ụgwọ. Nke a kpatara gọọmentị nwere mmasị inye Ọtụtụ ndi obere azụmahịa (SME) ego mgbazinye. Ọ bụrụ na ị tụlee ụzọ gara aga etu onye isi ala siri nweta ụgwọ na ụzọ onye isi ala ugbu a siri kwusi iweta ego ụgwọ ị ga-aghọta nke ọma.
Goodluck Jonathan nwere ụgwọ nde mmadụ asaa dika na akụkọ ndi Sahara. ka m na-ede ihe a ugbu a gọọmentị no na ọchịchị ga eweta Ọtụtụ ego iji dozie mbinye ego anyị gara aga na nke a bụ otú anyị ga - esi nọgide. Otu ga-agbata mbibi onye ọzọ ga agbata kwa nke ya iji belata ụgwọ nke ọzọ ma anyị ndị mmadụ bụ ihe ga-ata ahụhụ nke ukwuu. Enweghị olileanya na ị ga-edebe naira ahụ n'ụlọ akụ gị.
Ugbu a, enwere m naanị narị abụọ na akaụntụ GTBANK m na mgbe ọ bụla achọrọ m ego, naanị dash ka m ga ere maka mkpa ahu. Ụmụnne m na ndị enyi m ugbu a, na enweta onyinye n'aka m naanị na DASH M ga-agwa gị mgbe niile na anaghị m edebe “FIAT”.
Ikwụpụ ụgwọ ga eme ihe esi nwanye ike
Mgbe ị kwụpurụ ụgwọ ego ahu ọ naghị aga na akaụntụ ọ bụla, ọ ga-apụ n'anya. Nke a bụ ya mere na nkwụghachi ego mbinye dị iche na ụzọ nke esi eme ego. M na-achị ọchị mgbe m gụrụ akụkọ a nile nke ịkwụghachi ego mgbazinye n'oge gara aga na ụzọ etu esi enyere akụnụba ala anyi aka. Bịa, ọ dịghị ihe ga-enyere akụnụba ụwa aka karia ego mgbazinye , nke a bụ otu e osi di, ma Nigeria ga-ata ahụhụ nke a karịa. Ụlọ akụ na-emepụta ego mgbe ha nyere ego mgbazinye ma kwatuo ego mgbe ha kwụrụ ụgwọ.
Ọ gaghị ekwe omume i belata ụgwọ anyị ghara ime ihe osi nwanye ike. Onye ọ bụla nwere ike ịkwụ ụgwọ ha site na iji ego nke e kere mgbe mmadụ ji ụgwọ.
Oleezi otú m ga-esi nweta ego n'efu
Site na iwepụ ego niile ahụ di na ụlọ akụ gị ma gbanwe ya na nnukwu ego cryptocurrency ma na naanị nke m ga-akwado bụ DASH na BITCOIN.
kedu etu esi kewaputa ego crypto a?
E kere Cryptocurrency site n'ahịa efu. Kedu ihe bụ ahịa efu? Ahịa efu bụ usoro doro anya nke ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa na ekpebi na aka ha ugwo ole ha choro, nke a mere na iwu na ikike ndi gọọmentị enweghi ike i bata na etiti azumahia ahu.
blogger 28 November 2020 at 00:49
I am really surprised by the quality of your constant posts.You really are a genius, I feel blessed to be a regular reader of such a blog Thanks so much..
অনলাইন ইনকাম 💕💋 font copy and paste
কিভাবে একটি ব্লগ তৈরি করবেন
Mbido Dash: Ihe nile banyere ya bụ ego Digitalu
Dash bụ otu n'ime ego di na weebu gbadosiri ụkwụ ike n'ime cryptocurrency enwere. ọ werela ọnọdụ onye nke iri na ime cryptocurrency nile di n' uwa, bia kwa nwee azumahia ijeri isii ma na azuta kwa narị nde abụọ na ụbọchị. Dash bu nnukwu ihe bia nwe kwa ọtụtụ uru n'ime ya. Na Dash Naijiria, anyi no na igbasa ozi banyere Dash, ihe eji ya eme na ụzọ di iche iche ma etu ndi Naijiria ga esi ji ya bu ego were nyere onwe ha aka na ndu ha ma bia nwe kwa ego na efu. Nke'a na akọwa ihe Dash bụ, otú o si arụ ọrụ, ya na ka osiri puta. Na isi Mbido Enwere ọchịchịrị E weputara DAsh na Jenụwarị 2014, oge ahu ọ bụ Darkcoin, onye no na isi oche ya mgbe ahu bu Evan Duffield. Eji otu afo gbanwe aha ya bụrụ Dash. Dash nwere ọtụtụ ihe mere ya ọpụrụ iche banyere ego cryptocurrency ndi ọzọ, ike goomenti elughi ya, ọnwe kwara etu ndi mmadu ga esi zigara onwe ha ego ogaghi egosi aha ha. ọrụ Dash ka na ga n'ihu, ndi Dash Core bu otu na ahu maka ya. Ugbua mmadu
Enwere onye ọ bụla na-ekwu okwu banyere Dash na ala anyị bụ Naijiria
O doro anya. Anyị na-akpọ anyi DashSquad Naijiria. DashSquad banyere otu ise sitere na ebe dị iche iche na akuku Nigeria maka nnabata Dash na ala anyị bụ Naijiria. Kedu ihe bụ Dash? Dash bụ ego dijitalụ ị nwere ike iji zụta ihe n'ebe ọ bụla. Di ka Na olu wikipidia.org ọ bụ ego cryptocurrency chọrọ i bu ego kachasị di mfe na ụwa. ọ bu gini ka m na akowa? Dash bụ ego di na ụdi digitalu. Otu isi nwere ike iji naira kwụọ ụgwọ maka ọrụ, ka i nwekwara ike iji ego digitalu(DASH). kedu ihe m na ede banyere ha? DashSquad Anyi bụ ndị mbụ na Naijiria maka cryptocurrency, bia nwe nnukwu aguu maka Dash. Anyi nile a hapuola naira maka Dash na eleghi anya na azu, cryptocurrency dị ka Dash bụ ihe kwesịrị mmadụ nile na Naijiria ugbu a. Dashsquad ebumnobi bụ ịkwado Dash na Naijiria. Ebumnuche anyị bụ ka anyị gba mbo hu na mmadụ ise ọ bụla ahuru n' ụzọ abụọ n'ime ha maara banyere Dash. Anyi abiaghi ikwụpụta okwu banyere krptocurrenci ozo, ọ bụ naanị